I-NIKAU RETREAT I-Mangawhai Iintloko zehlathi kunye neendawo zokuhlala elwandle
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJulia
Relax nabahlobo okanye usapho lonke e-NIKAU RETREAT eMangawhai Heads. Ibucala, inoxolo kwaye ijikelezwe lityholo ngasekunene kwebala legalufa. Hamba uye kwiivenkile zaseWood Street kunye neecafe okanye uqhubele kulwandle lwaselwandle, tavern, imakethi, iivenkile kunye neecafe. Unendlu epheleleyo ukuya kuthi ga kwi-6, kunye nenkosi eyahlukileyo "iphiko leendwendwe" elilala 2 kunye ne-ensuite epheleleyo kunye nempahla. Idesika yabucala ebiyelwe ngokupheleleyo lilanga ene-BBQ kunye nesidlo sangaphandle. Indawo yokupaka iyafumaneka kwisiza, kubandakanya nendawo yesikhephe esirhuqwayo.
Kuvakala ngathi lixesha leSiqithi kule propathi enesilingi zesitayile zasimahla zikunika loo mvakalelo yokuba ulwandle lusemnyango wakho.
Indlu enkulu ngaphezulu kwemigangatho emibini ibandakanya indawo yokuhlala, ikhitshi, indawo yokuhlala ye-6-8, ibhedi yesofa ephindwe kabini kwigumbi lokuphumla, kwigumbi eliphezulu linegumbi lokuhlambela eligcweleyo elinebhafu, igumbi lokulala likakumkanikazi, kunye neebhedi ezi-2 ezingatshatanga kwindawo eyahlukileyo yokufika. Iimbono zasemaphandleni ukusuka phezulu. Impompo yobushushu / iyunithi ye-aircon, ithelevishini, i-WIFI kunye ne-chromecast yokusasaza.
Ukwahlula iofisi yephiko leendwendwe kwinqanaba elinye kunye nebhedi yenkosi kunye ne-ensuite equka ishawa enethayile kunye nomatshini wokuhlamba.
Iingcango zesilayidi ezivula ngokupheleleyo izindlu, kunye neendawo zokuvula iifestile zivumela impepho yolwandle ingene endlwini.
Khululeka kumgangatho obiyelwe ngokupheleleyo welanga kwaye wonwabele ikofu kumatshini we-nespresso obonelelweyo. Itafile yokutyela yangaphandle kunye nezitulo, kunye nezongeziweyo ezakhiwe kwindawo yokuhlala kunye nesikhululo se-bbq zenza ukutya kube yimpepho. Zonke zisetwe kwindawo ethe tyaba engqongwe ngamatyholo omthonyama, enikezela ubumfihlo obugcweleyo.
** Ngelixa le iyipropathi yosapho, nceda wazi ukuba indlu enkulu inezitebhisi zangaphakathi kunye nodonga olubizwa ngokuba yi-atrium-styled sesiqingatha sodonga kwigumbi lokulala likakumkanikazi elijonge indawo yokuphumla, lenza indawo ephezulu ukuba ingalungeli abantwana abangaphantsi kweminyaka esi-8.
40" TV ene-I-Chromecast
Ukumiselwa kwehlathi labucala. IMangawhai Heads ibonelela ngoluhlu lwemisebenzi ebandakanya ulwandle, ichweba, igalufa, iivenkile, iindawo zokutyela, iikhefi, iimarike kunye nethaveni.